UCCW ny hoditra sy ny fampianarana tsara indrindra | Androidsis
Manaraka ny tsipika nalaina tamin'ny lahatsoratra teo aloha, anio dia te hanolotra anao a Android fampiharana, fa raha vantany vao fantatr'izy ireo kely izany, dia tena ilaina amin'ny terminal rehetra izany, ary miaraka amin'izany isika dia afaka mamorona tsy mampino widgets amin'ny birao izay hanovantsika tanteraka ny lohahevitra na ny hoditry ny Android.
Widget farany manokana (UCCW) no anarany ary miaraka amina fonosana kisary, Apex Launcher o Nova Launcher ary ny sary eo afovoan'ny birao dia afaka manova tanteraka ny endrik'ireo Android mahazo desktops toa ireo asehoko anao eto amin'ny sary eto ambany izahay.
Inona ny UCCW?
UCCW o Widget farany manokana Izy io dia fampiharana maimaim-poana tanteraka izay ahitantsika amin'ny fomba ofisialy avy amin'ny magazay fampiharana Android Play Store.
UCCW dia tonian-dahatsoratra feno sary mamela antsika hamorona ny Widgets anao manokana tsy misy fetra, amin'ireo maro ao aminy toetra azontsika atao ny manasongadina ireto asa manaraka ireto:
Mpanonta sary feno
Singa ara-potoana sy daty
Singa amin'ny famantaranandro
singa amin'ny fampandrenesana samihafa
Manitsy ny haavon'ny mangarahara ao amin'ny Widget
Manafatra fisie amin'ny endrika uzip hampiharana lohahevitra noforonin'ny mpampiasa hafa
…… ary maro hafa.
Miaraka amin'ity fitaovana ity, (miaraka amin'ny Launchers, Icons, ary Wallpapers), afaka mamorona ny tenantsika isika fifandraisana mahavariana toa ireto:
Na dia hitanao aza fa sarotra loatra izany, in Androidsis Hanome anao ny rakitra rehetra sy ny torolàlana hahafahanao mampihatra ny fifandraisana o hoditra manaitra indrindra izay efa hitanao.
Manoro hevitra ny fampidinana azy sy ny fametrahana azy izahay satria hanomboka a andian-dahatsoratra izay hanehoanay anao hafa hoditra ary ny fomba dingana-dingana amin'ny fametrahana azy ireo amin'ny fitaovanao.
Ahoana ny hevitrao momba ny fampiharana?
Fanazavana fanampiny - Fampiharana tsy mampino ho an'ny Android: Sherpa, mpanampy amin'ny feo amin'ny fiteny espaniola tanteraka
Ampidino - Widget farany manokana (UCCW)
UCCW - Widget ho an'ny fanao farany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana Android mahagaga: Ultimate Custom Widget (UCCW)
Efa nahita an'ity fampiharana ity tamina horonantsary vitsivitsy aho ary hitako fa tena mahaliana, hanaraka ny lahatsoratrao aho Francisco.
Tongasoa eto aminao, manantena aho fa maro amintsika no manaraka ireto lahatsoratra ireto satria mahaliana tokoa izy ireo.
Nanao veloma anao aho ary miarahaba anao tonga soa ..
Ahoana ny fametrahana ny Samsung Galaxy S4 Launcher amin'ny Android rehetra